Dawlada Somaliya oo beenisay war Kiiniya suuqa soo gashatey oo oohina - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dawlada Somaliya oo beenisay war Kiiniya suuqa soo gashatey oo oohina
Dawlada Somaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantey war Kiiniya suuqa soo gashatey oo oohina. Kiiniya ayaa sheegtay in Somaliya ogolaatey in is-fahamkii hore wax lagu dhameeyo arintana uu galay Cabi Axmed.
Saxaafada Kiiniuya oo war noocaasa sugeysa ayaa ku hungowdey markii madaxa is gaarsiinta ee madaxweynaha Somaliya uu si cad oo caro leh u beeniyay.
Anaga iyo Kiniya waxa arini noo taalaa maxkamadaa. Kiiniya ayaa diidey sharciga maxkamadaa waana tan ay ugu cararayso in dhulka Somaliyeed ay si been beena loogu saxiixo.
Waxa hore u saxiixay mid noocana C/raxmaan Cabdishakuur iyo Cumar C/rashiid Sharmaake waxase ka qabtey barlamaanka Somaliya oo diidey. Nasiib daro lama eryin C/raxman Cabdi Shakuur iyo Cumar C/rashiid Sharmaake waxayna ka mid yihiin kuwa ku wareega Kiiniya yo Imaaraadka.
Kiiska ayaa maxkamadu eegi doontaa laba bilood muddo laga joogo hadda. Kiiniya ayaa ka gariirsan laakiin ma Jiro wax kale oo u furan inay aqbasho mooyee, weyna ogtahay inayna rajo sugeyn waana ta keentay inay qaylada badiso.
Hay’adda isku xirka bulshada ee Turkiga iyo mashruucyada ay Somaliya ka fuliso
Hay'adda isku xirka bulshada ee Turkiga ee loo ...
Raiisal wasaare Xasan Cali Kheyre oo ka hadley ujeedada safarkiisa Maraykanka
Rasiisal wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadley ...
Taliye ka hadley sida RABI uga badbaadiyay isku day dil
Sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada dilka ...
Maamulka Muuse Biixi oo ka hadley ciidan ka goostey
Maamulka Somaliland ee uu Ka taliyo horjooge Muuse ...
Qisada qoys Holandays ah oo been loogu sheegay aduunyo gadoon oo la helay
Tuulo ku taala dalkaasi Holand ayaa laga badbaadiyay ...